Ubuntu Studio 19.10 ichauya neLSP plugins, pakati pezvimwe zvinhu zvitsva | Linux Vakapindwa muropa
Ubuntu Studio 19.10 ichauya neLSP plugins, pakati pezvimwe zvinhu zvitsva
Disco Dingo isati yaburitswa, paive nemibvunzo pamusoro pekuti Ubuntu Studio yaizoramba iri iyo yepamutemo manakiro eCanonical mashandiro ehurongwa. Ini, akaishandisa kwechinguva angangoita makore gumi apfuura, ndinofunga haidi kuti ivepo uye kuti inozopedzisira yanyangarika, asi parizvino inoramba ichibata, pamwe nekutenda kunharaunda yevashandisi vasingabvumirani neni. Iyo inotevera vhezheni ichave Ubuntu Studio 19.10 Eoan Ermine, vhezheni iri muchikamu chekusimudzira iyo inoto sanganisira zvimwe zvitsva zvinokosheswa.
Ubuntu Studio 19.10 ichaburitswa zviri pamutemo pamwe nezvimwe zvakasara zvemhuri zveUbuntu pa 17 yeOctober. MuDisco Dingo mamwe mabugs akatogadziriswa, senge MIDI ALSA-Jack bhiriji iyo isina kupona kutanga patsva. Kutora mukana wekuvhurwa kweEoan Ermine, iyo multimedia vhezheni yeUbuntu inosanganisira mabasa matsva, mamwe acho achiuya kuUbuntu Studio Kudzora. Une zvimwe zveizvi nhau mushure mekucheka.
Chii chitsva chave kuwanikwa muUbuntu Studio 19.10
PulseAudio mabhiriji mazhinji (emunhu nzira yekushandisa).
Jack Status chinongedzo mukati mehwindo.
DSP mita yekushandisa.
Kurumidza kunongedzera kuQASMixer, Carla uye Pulse Audio Kudzora.
LSP Mapulagi (Linux Studio Mapeji). Iko kuunganidzwa kwe91 Ladspa, LV2, VST plugins inoenderana naCarla, Ardor uye mamwe maDAW. Ivo vanozosanganisirwa nekutadza muUbuntu 19.10 Eoan Ermine. Kune ekare mavhezheni, anowanikwa mune yako Backports repository.
La Eoan Ermine chikamu chekuvandudza Yakatanga pakutanga kwaMay, zvinoreva kuti ichiri kutora nhanho dzayo dzekutanga. Pachine mwedzi mina kusvika yatanga kuburitswa zviri pamutemo, saka zvinotarisirwa kuti vacharamba vachizivisa dzimwe nhau zhinji. Kufambisa kwe wedzera default LSP plugins kungave kuri kuyedza kupa zvese zvinogoneka sarudzo / mabasa kutigonesa kuti Ubuntu Studio ine musoro, chimwe chinhu chandisinganyatso kujekerwa nezvacho. Iwe unofunga Ubuntu Studio inofanira kuramba iripo here kana kuti uri mumwe weavo vanofarira kuisa software inodiwa zvakasiyana?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Ubuntu Studio 19.10 ichauya neLSP plugins, pakati pezvimwe zvinhu zvitsva
I peres akadaro
Ini handioni kuti nei ichifanira kuramba ichiripo, yakanaka distro uye inopa rubatsiro kune vedu vedu vasina yakanaka kwazvo yewebhu kumhanyisa kurodha pasi mapurogiramu, pasina nguva inopedzerwa pane izvo dzimwe nguva zvisina tariro
Pindura kune yo peres
Chrome yatobvumidza kuchengetedza / kuchengetedza tabo mumapoka. Saka unogona kuzviedza
McKinsey Inotangisa Kedro, Yayo Yekutanga Vhura Source Chishandiso